Dawlada Ingiriiska(UK) oo Gabi Ahaanba Ka Mamnuucday Dalkeeda Isticmaalka Qaadka iyo Mirqaanka Soomaalida Ku Nool. - Cakaara News
Uk(CakaaraNews) Arbaco July 03,2013.Dowladda Britain, ayaa go’aan adag ka soo saartay isticmaalka Qaadka oo ka mid ah noocyada daroogada Maandooriyaha ah oo inta badan ay bulshada Soomaalida ee dalkaas sida Ba'an u Isticmaalaan. Qaadka ayaa waxa uu Dhalanteed-kiciya dareenka dadka cuna oo mararka Qaarkood kaliya lagu cabiraa waali dhar xidhan marka aad aragto hebel iyo hebel,sidoo kalana lumiya wakhtiyada maaraynta nolosha iyo shaqada burburiyana dhaqaalaha Qoyska iyo Dalkaba,isla markaana ay dowladda Britain mamnuucday gabi ahaan isticmalkiisa walow ay khubarrada ku xeel dheer daroogada ay ka soo horjeedaan tallaabadaasi ay qaaday Xukuumadda Britain ee lagu mamnuucay Qaadka.
Mr.Theresa May oo ah Xoghayaha arrimaha gudaha Britain, ayaa sheegtay in dadka Isticmaala Qaadka ay ka liitan dadka kale, iyadoona sheegtay in wixii manta ka dambeeya ay Dowladda UK joojisay gabi ahaan Isticmaalka iyo ka ganacsiga Qaadka.
Dhanka kale,Theresa May, ayaa sheegtay in isticmaalka qaadka uu khatar ku yahay caafimaadka Dadka iyo arrimaha bulshada,wakhti lumis,ku dhiirashada Qorshayaasha Dilka iyo dhaca taasina ay tahay sabababaha kalifay inay Jarto Dowladda si looga gaashaanto dhibaatooyinka uu Qaadka ku hayo Bulshadda iyo dawlada.
Bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Britain ayaa fikrad ahaan ku kala qeybsan mamnuucista qaadka iyadoo qaar ka mid ah bulshada ay ka soo horjeedaan in la mamnuuco Qaadka, halka kuwa kalane ay Taageersan yihiin joojintiisa kuwaasoo u badan Dumarka oo wakhti u waayay nimankooda. Soomaalida isticmaasho Qaadka ee ku nool Britain ayaa Maanta dareen xun ka muujiyay Mamnuucida Qaadka, iyagoona ay maanta ula mid ahayd maalin madow, ka dib markii Britain ay joojisay Qaadka